January 17, 2021 Xuseen 1
Puntlandtimes (Hargaysa)-Ciidanka ammaanka ee maamulka Somaliland ayaa saacadihii lasoo dhaafay xabsiga dhigay Haweeney baraha Bulshada ku faafisay muuqaal ay ka duubtay Gabar yar oo u shaqeyneysay, iyadoo si aan wanaagsaneyn ula dhaqantay gabadha yar.
Ciidanka Booliska oo howlgal sameeyay ayaa markii dambe ku guuleystay inay gacanta kusoo dhigaan haweeneyda oo lagu magacaabo Zamzam Ismaaciil Cartan, taasi oo muuqaal ka duubtay gabar yar oo u shaqeyneysay, una adeegsatay awood.
Muuqaalka laga duubay gabadha yar ayaa la arkayay Zamzam Ismaaciil oo gabadha ku qeylineysa, sidoo kalena ku cabsi gelineysa dacwad Maxkamad, waxaana muuqaalka gabadha uu siweyn maalmihii lasoo dhaafay u qabsaday baraha Bulshada.
Dhanka kale mas’uuliyiinta ugu sarraysa Bangiga dhexe ee maamulka Somaliland ayaa shaaciyey in uu shaqo siiyey gabdha-yar ee muuqaalka laga duubay iyada oo la maagayo, waxaana Qoraal kasoo baxay Bangiga lagu yiri.
“Madaxda Sare ee Baanka Dhexe ee SL, markii ay arkeen muuqaalka lagu baahiyay barraha bulshadda ee ku saabsan gabadha yar ee gacanta ku xiran calanka SL, taas oo ay muuqatay ku xadgudub xuquuqiyaadka aasaasiga ah ee gabadha yar, isla markaana ay arkeen duruufaha ku gadaaman qoyska gabadha yar”.
Sidoo kale Qoraalka kasoo baxay Bangiga ayaa lagu yiri “Waxaa uu Guddoomiyaha Baanku Go’aamiyay in gabadhaas yar laga shaqaalaysiiyo Baanka Dhexe ee Somaliland”.
Ha la xidho, boqolaal kale oo gabdho ah ayaa dhibaatadasi haysata, waa in loo sameeya dallad ilaalisa oo daba gasha, Illaahay kama xishoonayaan, carruurtooda uun baa ifka ku leeli doonta, anaga usoo taagnay dad aan naqaano oo sidaa hablaha u shaqeeya u geli jiray, oo carruurtoodii Yurub jeelasha ku wada jirto